Solika sy fitaterana: tsy voafehin’ny mpitondra mihitsy ny vidim-piainana | NewsMada
Solika sy fitaterana: tsy voafehin’ny mpitondra mihitsy ny vidim-piainana
Mahay maka dera any amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny mpitondra. Tsy hita mihitsy anefa ny fitsinjovany ny vahoaka nifidy azy ireo, indrindra amin’ny fifehezana ny vidim-piainana.
Toy ny isam-bolana, niampy 50 Ar avy indray ny vidin’ny lasantsy (lasa 4.100 Ar/l) sy ny gazoala (3.450 Ar/l), nanomboka omaly 1 aogositra. Efa nahatsinjo izany ny mpitatitra ka nasondrony ho 500 Ar koa ny saran’ny taxi-be. Ampolony ny kaoperativa nampihatra io, notarihin’ireo mivondrona ao anatin’ny Fitaterana mendrika eto Antananarivo (FMA), ahitana ny laharana 163, ny 194, ny 192, sns, ary efa narahin’ny kaoperativa Sitraka (109) sahady. Azo antoka hanaraka koa ny hafa, satria eo am-pandinihana ny Fiombonamben’ny mpitatitra eto an-tanàn-dehibe (UCTU).
Raha aravona ireo tranga roa mifampiankina ireo, azo hitsina fa tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy ny fidangan’ny vidim-piainana. Manamarina izany ny tarehimarika navoakan’ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena fa 9% ny fisondrotry ny vidim-piainana ny faran’ny taona 2017 raha toa ka 7% ny taona 2016. Efa misasaka ny taona 2018, vao mainka mihamafy ny vidim-piainana satria tsy mitsaha-misondrotra ny vidin-tsolika, ny sandan’ny Ariary miohatra amin’ny vola vahiny euro sy dolara. Soa fa nidina ny vidim-bary satria tsara sady nitombo ny vokatra, ny taona 2018.
Tsy misy kandidà sahy
Hiditra amin’ny fotoam-pifidianana isika izao. Mitady seza sy fahefana ny mpanao politika, andaniny, ary mitady toky sy fiovana ho any amin’ny fandrosoana ny vahoaka sy ny mpifidy, ankilany. Hatreto, mifanalavitra ireo roa ireo, na mifampiankina aza. Maro ny fanirian’ny mpanao politika, saingy tsy afa-manoatra, “minia” tsy sahy mandray fanapahan-kevitra satria voafatotry ny “hery hafa”, indrindra ny avy any ivelany. Maro sy mavesatra ny fepetran’ny mpamatsy vola vahiny, toy ny “tsy maintsy” hanalalahana ny sehatra samihafa, toy ny angovo (herinaratra sy solika), ny varotra (fidiran’ny entana avy any ivelany), sns. Hany ka tsy mitsaha-mitotongana ny sandam-bola Ariary miohatra amin’ny vola vahiny, hividianana ny entana avy any ivelany. Hafarana avy any ivelany avokoa ny 85%-n’ny entana ilaina eto Madagasikara. Tsy afa-manoatra satria malemy ny indostria, tsy mety miarina ny fizahantany, manjaka ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly, sns.